निर्वाचन क्षेत्र - तनहुँ २(ख)
तनहुँ २(ख) प्रदेश न. ४ / तनहुँ
प्रदेशसभा चुनावका लागि गोरखा जिल्ला क्षेत्र नं. २ (ख) मा भिमाद नगरपालिका, घिरिङ र ऋषिङ्ग गाउँपालिका रहेका छन् ।
बसन्ती आले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
किरण गुरुङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
ध्रुब वाग्‍ले नेपाली कांग्रेस
राम शरण गैह्रे राष्ट्रिय जनमोर्चा
जेकेन्द्र कुमार श्रेष्‍ठ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
नारायण प्रसाद खनाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
झक बहादुर थापा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
थप निर्वाचन क्षेत्र
तनहुँ १ (क)
तनहुँ १ (ख)
उदयपुरमा १० बजेदेखि गणना सुरु हुने
रुपन्देही १ मा कांग्रेसलाई पछ्याउदै एमाले
दाङमा विप्लवका २० कार्यकर्ता पक्राउ
माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी दोब्बर मतले अगाडि
सुनसरीमा अपांगता भएका ब्यक्तिले मतदान गरे
"फेसबुक" मार्फत सहभागि हुनुहोस् !
उज्यालोको चुनाव बिशेषमा तपाई पनि पत्रकार ! उज्यालोको नागरिक पत्रकारितामा नेपाली नागरिकलाई स्वागत छ !
उज्यालोको फेसबुक पेज www.facebook.com/ujyaalo क्लिक गर्नुहोस् । आफ्ना उम्मेद्वार, पार्टी वा चुनावका बारेमा भन्न मन लागेका कुरा, फोटो र भिडियो मार्फत हामीलाई पठाउनोस् । आफ्नो पूरा नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर लेख्न नबिर्सनु होला । हामीलाई लेख्दा नेपालीमा प्रीति वा युनिकोड प्रयोग गर्नुहोला । रोमनमा नलेखिदिनु होला ।
उम्मेद्वार, पार्टी वा चुनावका बारेमा तपाईलाई भन्न मन लागेका कुरा, फोटो र भिडियो पठाउन हामीलाई ईमेल पठाउनोस् । ईमेल ठेगाना election@unn.com.np मा तपाईले पठाएका सबैथोक हामी सजिलै पाउँछौ ।
जहाँ भए पनि उज्यालोको नागरिक पत्रकारितामा नेपाली नागरिकलाई स्वागत छ !
"ट्वीटर" मार्फत सहभागि हुनुहोस् !
उज्यालोको ट्वीटर हेण्डल @ujyaalo लाई मेन्सन गर्नुहोस् । अनि चुनावका बारेमा आफुलाई भन्न मन लागेका कुरा, फोटो, भिडियो हामीलाई पठाउनुहोस । यसो गर्दा आफ्नो पूरा नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर पनि लेख्न नबिस्नु होला । अनि नेपालीमा लेख्दा नेपाली युनिकोड मात्र प्रयोग गरिदिनु होला ।
"एसएमएस" मार्फत सहभागि हुनुहोस् !
आफ्नो मोवाईलको म्यासेज बक्समा गएर Vote भोट लेखि एक स्पेस दिनुहोस । अनि चुनावका बारेमा आफुलाई भन्न मन लागेका कुरा लेखि ३५५६६ मा पठाउनु होस ।
"आईभीआर" मार्फत सहभागि हुनुहोस् !
आफ्नै आवजमा अरुलाई केही भन्नु छ ? तपाईका कुरा उज्यालोको Interactive Voice Response System (IVR) मा तपाई आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गराउन हरेक बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म पैसा नलाग्ने फोन १६ ६० ०१ ५ ५५ ६६ डायल गर्नुहोस र आफ्ना कुरा रेकर्ड गराउनुहोस् । अरु सयममा ०१ ५०००१९२ मा फोन गरेर पनि IVR मार्फत आफ्ना कुरा रेकर्ड गराउन सकिन्छ ।
आफ्ना कुरा भन्न माथिको फेसबुक, ट्वीटर, एसएमएस अथवा आईभीआरको संकेत चिन्हमा क्लिक गर्नुहोस् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) पूरा विवरण
नेपाली कांग्रेस पूरा विवरण
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) पूरा विवरण
संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल पूरा विवरण
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पूरा विवरण
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पूरा विवरण
जाजरकोट प्रदेशसभा ‘ख’ मा एमाले उम्मेदवार करवीर शाही विजयी
दिन ढल्किदै गएपछि मतदाता ओइरिए (फोटो फिचर)
झापा १ मा विश्वप्रकाश संकटमा, तोडिएन सुरेन्द्रको अग्रता
उदयपुर क्षेत्र नम्वर २ मा माअाेवादीका सुरेशकुमार राई विजयी
बाबुरामलाई बधाई दिंदै नारायणकाजीले ट्वीटरमा लेखे – म खुशी नै छु